Ukuzibandakanya Kwezentengiso: Ukuzijabulisa namavidiyo | Martech Zone
Ukuzibandakanya Kwezentengiso: Ukuzijabulisa namavidiyo
NgoMsombuluko, Februwari 2, 2009 NgoLwesibili, Okthoba 6, 2020 Douglas Karr
Ukwakha ipulatifomu yamabhizinisi abazobhuloga kuwo kuyimpumelelo kuphela uma lawo makhasimende empeleni esebenzisa ipulatifomu. Siyazi ukuthi amaklayenti ethu azophumelela ekutholeni imbuyiselo ekutshalweni kwemali uma nje singabenza badale futhi babelane ngokuthunyelwe okuningi ngemikhiqizo nezinsizakalo zabo.
Ukusetshenziswa kwepulatifomu kudinga ukuthi isoftware njengenkampani yesevisi empeleni ibe nesu lokuqinisekisa ukusetshenziswa. Ukusuka ebhodini ngokusebenzisa ukusetshenziswa kokuqapha, ipulatifomu kufanele ihlole ukuqinisekisa ukuthi usebenzisa ipulatifomu ngokuphelele. Kulula impela… ukusetshenziswa kuholela emiphumeleni, imiphumela iholela ekubuyisweni kotshalo-mali, futhi imbuyiselo ekutshalweni kwemali iholela ekuvuselelweni kwamakhasimende nokwandiswa.
Lapho sibona ukusebenzisa kwethu ukusetshenziswa, saba nobuciko bokuqhamuka nomkhankaso we-imeyili owafaka amanye amavidiyo akhiqizwe kabi futhi aqukethe ama-wacky ukuze adonse ukunakwa kwamakhasimende ethu.
Uma uzoshiya ukuthobeka kwakho emnyango, ungahle futhi uthumele ngakho. Besilokhu senza imikhankaso emisha yokuzibandakanya kabusha yamakhasimende anokukhiqiza okuqukethwe kwawo.
Sikhiphe konke ukuma futhi sazijabulisa ngamanye amavidiyo amaklayenti ethu. Zirekhodwe kusetshenziswa i-iPhone, iMovie, namathrekhi omsindo azenzakalelayo. Sizikhiqize zonke ngosuku sazikhiphela ngaphandle!
Ividiyo Emnandi Yokumaketha: Sicela Uthumele!
Ngemuva kwesonto elilodwa, imiphumela ibe mihle kumakhasimende ethu amaningi, ngakho-ke sibashiyele i-imeyili namuhla ukubabonga.
Ividiyo Emnandi Yokumaketha: Uthumele, uDoug Usindisiwe!
Futhi-ke, amaklayenti ethu angazange anyukele epuletini athola omunye umyalezo.
Ividiyo Emnandi Yokumaketha: Awuzange Uthumele, uDoug AKASINDISIWE!
Ukudalulwa: Ngingumninimasheya futhi ungumsunguli we-Compendium Blogware.
Tags: ibhulogiukuvumelanaiphoneisisusasaasukuzibandakanya kwevidiyouhambo lwevidiyovideos
I-Appirio Ixhuma iSalesforce neFacebook
Yekani Ukushumayela Izinkundla Zokuxhumana Kumabhizinisi
Feb 3, 2009 ngo-6: 45 PM
Feb 3, 2009 ngo-6: 49 PM
Futhi ngiyaxolisa ngokuthola indawo :), ngingomunye walabo okufanele bababhalele I-Sigma Micro's Ecommerce Gurus - Ibhulogi yokuhlanganisa futhi okuyihlazo akukabi khona !.
Feb 3, 2009 ngo-8: 49 PM
Yini ezothatha ukuze ukhiphe okunye okuthunyelwe? Ngisho ukuthi ngobuqotho - ngingayithanda impendulo yakho!